Induction Billet Kuchenesa Vira | induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
24h Inopfurikidza Billet Heating Furnace nekwenyoro yekutsva kwemhangura / aluminium / iron iron billets isati yatanga kupisa
Zve kudziyisa zvakasiyana siyana zvebhawa zvinhu: senge simbi & simbi, ndarira, ndarira, aruminiyamu chiwanikwa, nezvimwe.
Fungidzira chete kuti utaure, ruvara runoshandiswa ne simba rakasiyana.
Mabasa uye akakosha maratidziro akagadziriswa nevatengi zvinodiwa.
Zvichemo uye Mazano:
2. Dhizaini yakabatanidzwa: Sevha nguva yekumisikidza, mutengo uye nzvimbo.
3. Operation pani yakadzamidzirwa inoratidzira muchina unoshanda nyika, kufambisa kukanganisa kuongororwa.
1 Kunopisa nekutsanya uye kugadzikana kuchengetedza 20% - 30% magetsi magetsi pane echinyakare nzira;
Kubudirira kwepamusoro uye kushandiswa kwesimba kushandiswa
2 Muduku muhukuru Zviri nyore kuisa, kushanda nekugadzirisa
3 Yakachengeteka uye yakavimbika Kwete yakakwirira, yakachengeteka kune vashandi vako.
4 Kuporesa kuparadzanisa nzira Inokwanisa kushanda uchienderera mberi maawa makumi maviri nemana
5 edza kuzvidzivirira
basa mhando dzakawanda dzemarambi e-alarm:
pamusoro-ikozvino, pamusoro-gasi, pane kupisa, kuperevedza kwemvura, etc. Zvigadziko izvi zvinogona kudzora uye kudzivirira mishonga.
6 Kuchengetedzwa kwemagariro Chero hachina huni,
haina kubvisa nyota, hapana dongo-mvura
7 IGBT Type Dzivisa kukanganisa kwemambure emagetsi asingawirirani;
Iva nechokwadi chehupenyu hurefu hwemuchina.
Parameter ye billet kupisa furnace:
Mu induction billet kupisa furna iyo yese bhenget kana slug inopisa. Kazhinji zvikwereti zviduku kana slugs hopper kana ndiro inoshandiswa kuisa mabheti zvakananga kumativi ekuvhara mabheji, zvikwata zvinokonzerwa nemaketani kana mune dzimwe nguva pneumatic pushers. Iko mabheti anobva atungidzirwa kuburikidza neiripi imwe iri shure kweimwe pamvura yakanyoroveswa kana kuti michina yeramami inoshandiswa kuburikidza nebhokisi rinotapudza kukanganisa uye kudzivirira kupfeka. Kureba kwekopi ibasa rekudiwa nguva yakakosha, nguva yekuenderera mberi nechikamu uye urefu hwe billet. Muchikamu chikuru chemuchinjikwa chikamu chebasa hachisi chinhu chisingajairika kuti uine 4 kana 5 makopi mumakwikwi ekupa 5 m (16 ft) yemavilisi kana kupfuura.
Categories Technologies Tags aluminium billet moto furnace, billet kupisa, billet kupisa zvombo, billet kupisa furna, billet kupisa mhepo, billet kupisa system, ndarira billet moto, mhangura billet moto, Induction Billet Heating Furnace